Funga nezveShair Sachigaro yezvinhu zvekufamba
Kune akakura akasiyana e shawa zvigaro dziripo nhasi dzakagadzirirwa kubatsira munhu ane nyaya dzekufamba kugeza. Dzinouya mumhando dzose uye hukuru, zvinoreva kuti pane imwe kunze iyo inonyatsoenderana nezvido zvako.
Shower chair inotangira pane yakachipa epurasitiki resin zvinhu kune zvimwe zvechigarire seti kumusoro semabhura kana girenayiti. Dzakanyanya kukosha chair yekugeza haina maitiro akakosha; ndicho chigaro chisingapindi mvura. Kubva ipapo, unogona kuwana hurefu hunogadziriswa makumbo kuti aenderane nehurefu hwako chaihwo, iwe unogona zvakare kuwana armrests kuchengetedza maoko ako munzvimbo, uye iwe unogona zvakare kuwana imwe ine mavhiri ekufamba kwakakodzera.
Kune vanhu vazhinji, kugadzirisa shawa kana imba yekugezera kuti igare zvechigarire chair yekugeza chimiro chakanyanya kudhura. Imwe nzira ndeye kutenga iyo inotakurika shawa cheya iyo inogona kuiswa pane yekugezera pasi. Inogona kubviswa zviri nyore kana isiri kushandiswa uye nekukatanura kuti ichengeterwe kuitira kuzoshandisa.